Maitiro ekubudirira kugadzira rako rajidhi bhizinesi? | ECommerce nhau
Vanhu vazhinji vanotenda kuti pamusika pamhepo uye e-commerce mapuratifomu anogona kuve akafanana chinhu. Ichokwadi kuti ese ari maviri anoshandiswa pamabhizimusi epamhepo zvinangwa, asi pane musiyano wakakosha pakati pawo. Iyo webhusaiti yechitoro chepamhepo kana commerce inogona kuve mukana webhizinesi panguva ino nekuda kweakasarudzika maitiro eayo bhizinesi network.
Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kuvandudza ako ehunyanzvi zviitiko munzvimbo dzakasiyana uye zvinoenderana nezvaunofarira uye hunyanzvi. Kusvika pakuti iwe unogona kusarudza bhizinesi redhijitari munyika yemafashoni, mitambo, zororo kana varaidzo. Iwe hauna miganho kune kwaunofanira kuenda kuti utange rako rako bhizinesi zano. Nekuti chinonyanya kukosha ndechekuti iwe unofarira kwazvo chirongwa ichi.
Mukati meichi chirevo chizere, zvakakosha kuti kubva panguva ino utsanangure kwaunoda kunongedza bhizinesi rako. Kune izvo, zvinodikanwa kuti iwe uongorore sarudzo iyi kana kutomboigovana nevamwe vanhu vari mumamiriro akafanana. Pakupera kwezuva, ndezvekuwana ruzivo rwepamusoro kuti uite chirongwa chako uye kuti hachirambe chiri mudhirowa rekukanganwa. Uyu ndiye muvengi mukuru wauchazofanira kurwa naye kubva ino nguva zvichienda mberi.
1 Dhijitari bhizinesi: zvinopfuura chishuwo
2 Nhanho 1: Tanga bhizinesi rinozadza chinodiwa
3 Nhanho 2: Nyora kopi inotengesa
4 Nhanho 3: Dhizaini uye gadzira yako webhusaiti
5 Nhanho 5: Gadzira Nyanzvi Mukurumbira wega
6 Ita chirongwa chinoshanda
7 Ita hunyanzvi hunodiwa
8 Inoda rubatsiro kubva kune vamwe vanhu
9 Iva kondirakiti usati wave muvambi
Dhijitari bhizinesi: zvinopfuura chishuwo
Iwe haugone kukanganwa kuti chiitiko chepamhepo ichi chinoda nhevedzano yehunhu iwe yaunofanira kuwedzera kune rako bhizinesi pasipoti. Iko, hazvisi nyore nguva dzose kuti uzadzise uye nekudaro munzvimbo iyoyo ndipo paunofanirwa kutarisisa panguva ino. Hazvishamise kuti, kubudirira kugadzira rako redhijitari bhizinesi hazvisi nyore nguva dzose. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoda imwe nhamburiko pachikamu chako kana uchinyatsoda kugutsa ichi chakakosha chinodiwa.
Kuti iwe ugone kuzadzisa ichi chinangwa, tichaenda kukumisikidza nhevedzano yematanho ayo anokwanisika zvachose kubva pazano rako sedigital kana online online muzvinabhizinesi. Saka kuti zvishoma nezvishoma iwe unogona kuvhara zvimwe zvezvinangwa zvako zvaunoda. Kwese kupi, iwe hauna mubvunzo kuti pane yakateedzana nhanho yematanho iwe aunotora kuti uve nechokwadi chekubudirira kwako paunotanga diki online bhizinesi. Ndakaona zviuru zvevanhu zvichitanga uye kukura mabhizimusi akabudirira nekuita zvinotevera:
Tsvaga chaunoda wochizadza.
Nyora kopi inotengesa.
Dhizaini uye uvake inoshandisa-inoshamwaridzika webhusaiti.
Shandisa injini dzekutsvaga kutyaira traffic kune yako saiti.
Gadzira mukurumbira seunyanzvi wega.
Tevedza nevatengi vako uye vanyoreri kuburikidza neemail.
Wedzera mari yako kuburikidza nekutengesa kumashure uye kushambadzira kwekutengesa.
Chero ani zvake kubva ku newbie kune ane mukana wepamhepo muzvinabhizimusi anogona kubatsirwa nenzira iyi nekudzidza kutanga bhizinesi repamhepo.
Nhanho 1: Tanga bhizinesi rinozadza chinodiwa
Vanhu vazhinji vachangotanga kuita chikanganiso chekutsvaga chigadzirwa kutanga uyezve musika.
Kuti uwedzere mikana yako yekubudirira, tanga nemusika. Icho hunyengeri kutsvaga boka revanhu vari kutsvaga mhinduro kuchinetso, asi vasiri kuwana mhinduro zhinji. Iyo Internet inoita iyi mhando yekutsvaga kwemusika kuve nyore:
Shanyira maforamu epamhepo kuti uone kuti ndeipi mibvunzo iri kubvunzwa nevanhu uye kuti ndeapi matambudziko avari kuyedza kugadzirisa.
Ita kiyi yekutsvaga kuti uwane mazwi akakosha ari kutsvakwa nevanhu vazhinji, asi iwe hauna kukwikwidza kwakanyanya nemamwe masayiti.
Tarisa uone vangango vakwikwidza nekushanyira avo masaiti uye kucherechedza izvo zvavari kuita kuzadzisa chinodikanwa. Ipapo iwe unogona kushandisa izvo zvawakadzidza uye kugadzira chigadzirwa chemusika watovepo, uye wozviita zvirinani kupfuura makwikwi.
Nhanho 2: Nyora kopi inotengesa
Iko kune yakaratidza yekutengesa kopi fomula iyo inotora vashanyi kuburikidza neyekutengesa maitiro kubva panguva yavanosvika kusvika panguva yavanotenga:
Mutsa kufarira nemusoro unogombedzera.
Tsanangura dambudziko iro chigadzirwa chako chinogadzirisa.
Simbisa kuvimbika kwako semugadziri wezvinetso.
Wedzera zvipupuriro kubva kuvanhu vakashandisa chigadzirwa chako.
Taura nezve chigadzirwa uye kuti chinobatsira sei mushandisi.
Gadzira garandi yakasimba.
Mukati mekopi yako, unofanirwa kutarisa kuti rakasarudzika sei chigadzirwa chako kana sevhisi kugadzirisa matambudziko evanhu kana kugadzirisa hupenyu hwavo. Funga semutengi uye bvunza "Chii chiri mandiri?"
Nhanho 3: Dhizaini uye gadzira yako webhusaiti
Paunenge uchinge uine musika wako uye chigadzirwa, uye wakaroverera yako yekutengesa maitiro, iwe ikozvino wagadzirira yako diki bhizinesi webhusaiti dhizaini. Rangarira kuichengeta iri nyore. Iwe une masekondi asingasviki mashanu kuti utaridzwe nemumwe munhu ... zvikasadaro vanozosiya uye vasingazomboonane zvakare. Mamwe matipi akakosha ekuchengeta mundangariro:
Sarudza imwechete kana maviri akareruka mafonti pane chena kumashure.
Ita kuti kufamba kwako kuve kwakajeka uye nyore, uye zviite zvakafanana pamapeji ese.
Ingoshandisa magirafu, odhiyo kana vhidhiyo kana ivo vachiwedzera meseji yako.
Sanganisira yekupinda-mukati kupihwa kuti ugone kuunganidza email kero.
Ita kuti zvitoro zvive nyore: hapana anodarika maviri anodzvanya pakati petarisiro uye kubuda.
Yako webhusaiti chiratidzo chako chepamhepo, saka ita kuti zvive nyore kumutengi.
Nhanho 4: Shandisa injini dzekutsvaga kukwezva vatengi kuwebsite yako.
Bhadhara-pe--kushambadzira kushambadzira ndiyo nzira iri nyore yekutora traffic kunzvimbo itsva. Iyo ine maviri mabhenefiti pane kumirira traffic kuti iuye kwauri chaiko. Kutanga, kushambadzira kwePPC kunoonekwa pamapeji ekutsvaga nekukasira, uye chechipiri, kushambadzira kwePPC kunokutendera kuti uedze mazwi akakosha akasiyana, pamwe nemisoro yemusoro, mitengo, uye nzira dzekutengesa. Kwete chete iwe unowana pakarepo traffic, asi iwe unogona zvakare kushandisa PPC kushambadzira kuti uwane yako yepamusoro inoshandura mazwi akakosha. Iwe unogona ipapo kugovera iwo akakosha mukati mesaiti yako mune yako kopi uye kodhi, izvo zvinobatsira chinzvimbo chako mumakemikari ekutsvaga mhedzisiro.
Nhanho 5: Gadzira Nyanzvi Mukurumbira wega
Vanhu vanoshandisa Indaneti kuwana ruzivo. Ipa iro ruzivo rwemahara kune mamwe masayiti, uye iwe uchaona yakawanda traffic uye zvirinani kutsvaga injini masosi. Chakavanzika ndechekugara uchisanganisira chinongedzo kune yako saiti nechinhu chimwe nechimwe cheruzivo.
Ipa zvemahara uye zvehunyanzvi zvemukati. Gadzira zvinyorwa, mavhidhiyo, kana chero zvemukati izvo vanhu vanoona zvichibatsira. Govera izvo zvirimo kuburikidza neye online chinyorwa madhairekitori kana enhau enhau masaiti.
Sanganisira "tumira kushamwari" zvinongedzo mune yako webhusaiti yezvakakosha zvemukati.
Iva nyanzvi inoshanda pamabhizimusi maforamu uye masocial media masaiti uko yako yekutengesa musika iripo.
Inoenderana: Maitiro Ekugadzira Yemahara Facebook Messenger Chatbot Pasina Kodhi
Iwe uchasvika kune vaverengi vatsva. Asi kunyangwe zvirinani, saiti yega yega inoburitsa zvemukati zvako ichave nec link kune yako. Tsvaga injini dzinoda zvinongedzo kubva kune akakodzera masosi uye zvinokupa mubayiro iwe mune masiteki.
Nhanho 6: Shandisa Simba reEmail Kushambadzira kushandura Vashanyi kuvaVatengi.
Paunovaka rondedzero yesarudzo, urikugadzira imwe yezvinhu zvakakosha kwazvo zvebhizimusi rako repamhepo. Vatengi vako nevanyori vakupa mvumo yekuvatumira email. Zvinoreva:
Uri kuvapa chimwe chinhu chavakakumbira.
Iwe urikudziridza hukama hwehupenyu hwese navo.
Mhinduro yacho i100 muzana inogona kuyerwa.
Email kushambadzira yakachipa uye inoshanda kupfuura kudhinda, terevhizheni, kana redhiyo nekuti yakanangwa zvakanyanya.
Chero ani anoshanyira yako saiti uye opts kune yako rondedzero inotyisa kupisa lead. Uye hapana chishandiso chiri nani pane email kuchengetedza iyo inotungamira.
Nhanho 7: Wedzera mari yako kuburikidza nekutengesa kwepasi uye kutengesa.
Imwe yematanho akakosha ekutengesa eInternet ndeyekuvandudza kukosha kweupenyu hwese mutengi. Vanokwana makumi matatu nezvina kubva muzana yevanhu vakatenga kubva kwauri kamwe vachatenga kubva kwauri zvakare kana iwe ukatevera. Kuvhara iko kwekutanga kutengesa ndicho chikamu chakaomesesa, tisingataure inodhura. Saka shandisa iyo backup backup uye yekuwedzera yekutengesa kuti vatengezve:
Ipa zvigadzirwa zvinoenderana nekutenga kwako kwepakutanga.
Tumira zvemagetsi kuponi maponi avanogona kununura pakushanya kwavo kunotevera.
Ipa zvigadzirwa zvine chekuita pane rako "Ndatenda" peji mushure mekutenga.
Ipa mubairo vatengi vako nekuvimbika kwavo uye vanozove vakatonyanya kuvimbika.
Ita chirongwa chinoshanda
IInternet inochinja nekukurumidza zvekuti gore rimwe online rinokwana makore angangoita mashanu munyika chaimo. Asi misimboti yekuti ungatanga nekukura rakabudirira online bhizinesi haina kuchinja zvachose. Kana iwe uchangotanga bhizinesi diki repamhepo, tevera izvi kuteedzana. Kana iwe wave uri pamhepo kwenguva yakareba, ita ongororo nekukurumidza uye uone kana paine matanho auri kuregeredza kana kumbobvira waita pakutanga. Iwe haugone kukanganisa nezvakakosha.
Kana iwe waida kugadzira yekushambadzira agency anopfuura makore makumi maviri nemashanu apfuura, chipingamupinyi chekupinda chaive chakakura. Nenzvimbo yechinyakare yedhijitari, iyo yepamusoro yekugadzira mashandiro akadaro yaityisa, uye zvingangoita zvisingaite pasina mari yekutanga. Pamusoro pekutanga kwemitengo, iwe waigumira kune epanyama uye echinyakare midhiya uye nemusoro wakabatana nezvose, asi kugadzira chimwe chinhu chakafanana nekudzoka pane kudyara kwevatengi vako. Kuve "mune mutsvuku" kwenguva refu, yakareba yakanga isingadzivisike.
Nguva yachinja. Hazvigoneke kufunga kuti munhu ane hunyanzvi kana timu diki inogona kuumba inoshandisika yekushambadzira agency kubva pakutanga mumwedzi mishoma (nerubatsiro diki, hongu).
Makambani ari kushandisa yakawanda yemari yavo yekushambadzira padhijitari kushambadza kupfuura nakare kose, uye munhu wese anoda chidimbu chechiito. Muchirongwa ichi, ini ndinokufamba nematanho mashanu aunofanirwa kutora kana iwe uchida kuvaka yepamhepo yekushambadzira agency kubva pakutanga (vimba neni, ndatova ndiripo).
Ita hunyanzvi hunodiwa
Pamhepo pamusika mifananidzo. Kana iwe uri munhu anonyunyuta ane zviono zvikuru zvekuve Neil Patel uchangogamuchira diploma yako, ungangotadza zvinosiririsa.
Unogona kuve unogadzira uye wakangwara kunge chero munhu ari mumutambo, asi kana usina kugadzirira kana kuve neruzivo rwakakwana kuti utarisane nemazhinji ma nuances eakaunti manejimendi uye hukama hwevatengi, iwe unokurumidza kuwana rimwe basa. Zvinotora makore kuti vamwe vakudziridze hunyanzvi hunodiwa, zvinogona kutora zvishoma kune vamwe. Zvisinei, ndinofunga iwe unofanirwa kubata basa chairo kwenguva yakati usati waenda wega.
Nharaunda dzebasa dzakanyanya kuomarara kupfuura zvatinofunga patinenge tichishanda mazviri. Pamusoro pebasa chairo raunoburitsa kune zvakawanda zvinotarisirwa, zvekutaura uye zvisiri zvekutaura zvekuita zvekudzidzira, uye nezvematongerwo enyika. Zvese zvinhu kubva pakurongeka kwesangano kune tsika nemagariro, chigadzirwa, uye hutungamiriri zvinoita chinhanho mukuita kwako kwezuva nezuva (uye nebasa rako).
Usati wagona hunyanzvi hwekushambadzira kwedigital, iwe unofanirwa kuona kuti zvakaita sei kushanda panogona kushanda nevatengi vako. Izvi zvinongoita zvisingaiti kuti uve wakasarudzika uye wakasarudzika nyanzvi. Kana vatengi vako vakashushikana uye pamwe vachikumisikidza pauri, hausi kuzozvitora pachako.
Inoda rubatsiro kubva kune vamwe vanhu
Wana rumwe rubatsiro kukudza yako agency neyedu yemahara gwara: Dzimwe Nzira dzeKukunda uye Kuchengetedza Mamwe Vatengi
Nezvo zvakati, zvakakosha kuti unzwisise kuti hunyanzvi hunyanzvi hunongova 50% yeyekupedzisira chigadzirwa ndiwe. Iwe unofanirwa kuve wakanaka pane izvo zvauri kuzopa se "nyanzvi" masevhisi. Hazvina mhosva kuti mutambo wako wekutengesa une hunyanzvi zvakadii, mutengi anozozviona kana kuti kuti atengeswa mafuta enyoka. Iwe unofanirwa kugona kuwana mhinduro. Kana iwe urikutanga rako rebasa maneja vatengi kune makuru mahofisi, ini ndinokukurudzira iwe kuti utange kushanda kuchikwata chekushambadzira kana kuunganidza vashoma vevashoma vatengi kuti vadzidze iwo makwara uye hunyanzvi iwe hwauchazoita nawo.
Izvo zvisiri pachena kune avo vasina kumbobvira vari muchikwata chekushambadzira imarii inoiswa mari mairi. Kunze kwedzvinyiriro yekugadzira, iwe unofanirwa kudzidza masystem akaomarara, uye kana timu yako iri diki, iwe unofanirwa kukudziridza hunyanzvi hwakasiyana kuti uwane kunyange mishandirapamwe yakapusa pasi.
Izvi zvinosanganisira, asi hazvirevi kune:
Vaka mapeji anomhara
Vaka mameseji uye chinzvimbo
Kudzidza masisitimu seMarketo, HubSpot, uye Salesforce
Kubudirira kuita trace
Kupedza maawa uchikwira kungoiona ichikundikana
Kumanikidza kukuru kuburitsa
Kubatsira kwekutarisira vatengi ndechekuti mazhinji eaya maficha anotarisirwa asati asvika kwauri. Nekudaro, kuve neruzivo rwekushanda pazvinhu izvi kunokupa iwe kuwedzerwa kukosha kwekuziva chaizvo zvauri kutaura nezvazvo kana chimwe chinhu chavanokupa chisingashande. Izvo zvakare zvinokubatsira iwe kubata nedzvinyiriro rekuendesa mhando mhedzisiro nekuti iwe wakambovapo kare… kazhinji.
Iva kondirakiti usati wave muvambi
Kuve nebasa rinobhadhara rinokutendera kuti uvhiywe huropi pasina hupenyu hwese hwechikwereti humbozha vazhinji vedu tinotora sezvisina basa. Kutora kusvetuka kubva mukuzvishandira pachako kune rurefu rurefu rwezvipingamupinyi zvekuti inogona kunge iri yega blog post. Chii chinodzikamisa yakawanda yenjodzi iyi kuvaka hwaro hwebhizinesi usati waita danho rekuriita izere. Ini ndinokurudzira kuita kumwe kutsvaga mabasa kwenguva yakati ndakabata yakazara-basa nekuda kwezvakasiyana zvikonzero, kusanganisira ...
Iyo inokutendera iwe kuti uite basa uri wega pasina kutora yakawanda njodzi. Mupfungwa iyi, usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi kuti iwe une muenzaniso wehupenyu hwebhizinesi paunotanga kuita zvimwe zvezvirongwa zvataratidza muchinyorwa chino. Nekuti zvirizvo, izvo zvazviri pakupera kwezuva ndezvekuti iwe unozadzisa zvimwe zvezviroto zvako munzvimbo yebhizinesi redhijitari. Kuti uite izvi, kutsungirira kunofanirwa kuve chimwe chezvombo zvako zvine simba kubva ikozvino. Izvo zvinokubatsira iwe kuzadzikisa zvimwe zvinhu kupfuura zvaunofunga kubva pakutanga. Zvekuti mukupedzisira iwe ubudirire pamusoro pezvimwe zvinhu. Iko bhizinesi redhijitari rinogona kukubatsira iwe nezvishuwo zvaunazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Maitiro ekubudirira kugadzira rako rajidhi bhizinesi?